तीजी गीतको इतिहाँस र बदलिंदो अवस्था - NepaliEkta
तीजी गीतको इतिहाँस र बदलिंदो अवस्था
1 August 2021 1 August 2021 Nepaliekta	0 Comments
323 जनाले पढ्नु भयो ।
काठमाडाैं । विवाह गरेर गएकी महिलाले आफ्ना भोगाइ अभिव्यक्त गर्न तीज गीत गाउने परम्परा रहे पनि अहिले तीजका गीतले शब्द, सङ्गीत, भाका कुनै पनि पक्षमा त्यो मर्म बोक्न नसकेको लोकगायक तथा लोकगीतबारे अध्ययन गरेकाहरूले बताउने गरेका छन्।
लोक सङ्गीतका अध्येता डाक्टर गोविन्द आचार्यका भनाइमा अहिलेका तीज गीत ‘तीज गीत नभएर तीजका बेला गाइने गीत’ हुन्।
उनका अनुसार कुनै पनि पर्वमा गाइने गीतमा तीन वटा पक्ष शब्द, सङ्गीत र प्रस्तुति झल्किनुपर्छ।
“तीजमा अहिले गाइने गीतहरूमा न तीजको मर्म बोक्ने शब्द छन्, न प्रस्तुति छ र सङ्गीत नै,” उनी भन्छन्, “त्यसैले अहिलेका गीतलाई ‘तीज गीत’ भन्न मिल्दैन ती केवल तीजका बेला गाइने गीत” हुन्।
गीतका भावमा परिवर्तन
तीजका र अन्य थुप्रै लोक गीत गाइसकेकी लोक गायिका हरिदेवी कोइराला तीजका गीतले केवल महिलाका वेदना मात्रै नबोकी सामाजिक विषय पनि उठान गर्न सक्ने बताउँछिन्।
उनका अनुभवमा आफूले गाउन थालेको बेलाको तीज गीत र अहिलेका तीजका गीतमा धेरै परिवर्तन आउन थालेका छन्।
भातै र खाम्ला जेठो बुढो धानैको, तरकारी खाम्ला गाबा बरी लै
लिन र आए भेट्न आए मेरा दाजै, बिर्साइ दिए आमा बरी लै
लोक गायिका कोइरालालाई आफूले गाएका थुप्रै तीजगीत मध्ये यो माथिको गीत असाध्यै मनपर्छ।
तर पछिल्ला समय गाउन थालेको उनको गीतको बोल यस्तो छ-
‍लेक फुल्यो लालीगुराँस, बेसी फुल्यो टोनी बरी लै
जन्मै किन हेपिएको, यो छोरीको जुनी बरी लै
यसरी तीजका गीतले सामाजिक पारिवारिक आयाम जोड्ने भएकोले मौलिकता बचाएर गीतमा विकृति विसङ्गति आउन दिन नहुने उनी बताउँछिन्।
“हिजोको मौलिकता बचाउने हो न कि यसको व्यापार गर्ने। विकृति विसङ्गतिका रूपमा गीत गाएर र नाचेर तामझाम गर्न आवश्यक छैन,” उनी भन्छिन्।
“युट्युबमा भ्युज बढाउने वा व्यापारिक प्रयोजनका रूपमा बिगार्न पटक्कै हुँदैन।”
अहिले धेरैजसो गीत सामाजिक सञ्जालमा खोलेर हेरिने हुँदा त्यसको दबाबले पनि विकृति विसङ्गति झल्किएको जानकारहरू बताउँछन्।
सामाजिक सञ्जालमा तीजको होड
गत वर्ष सामाजिक सञ्जालमा असाध्यै चर्चित बनेको “सोचे झैँ जिन्दगी रैनछ” बोलको गीतको युट्युबमा १ करोड ६० लाख भ्यूज छ भने “चिटिक्कै भाछु रे” बोलको गीतलाई डेढ करोडले हेरेका छन्।
परम्परागत रूपमा महिलाहरूले गाउने गरेको तीजका गीत पछिल्ला समय पुरुषले पनि गाउन थालेका छन्।
गायक दुर्गेश थापाले दुई वर्षअघि गाएको “हामी पनि नाच्नुपर्छ बिच्च बिच्चमा” बोलको गीत डेढ करोडले हेरेका छन्।
तीजका गीत सामाजिक सञ्जालमात्रै नभई २०५७/२०५८ तिरबाट व्यावसायिक हुन थालेपछि गीतमा विकृति आउन थालेको लोकगायक तथा राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानका पूर्व अध्यक्ष चन्द्र शर्मा बताउँछन्।
उनले भने, “तीजका गीतलाई अडियो, भिडिओ तथा पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल र अन्य थुप्रै डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत जहिलेदेखि तीजका गीतमाथि व्यवसाय गर्न थालियो र पैसा आम्दानी गर्न थालियो त्यसपछि विकृति भित्रियो।”
मौलिकता झल्काउँछु भनेर दर्शक र श्रोताको नजर नपर्ने बाध्यतामा गायकहरू रहेको उनी बताउँछन्।
“पुराना मौलिकता जोगाउँछु, भाकाहरू हाल्छु भनेर कसैको नजर पर्ने वाला छैन। व्यवसाय गर्नका लागि गीतमा उद्दण्ड मच्चाउनुपर्छ,” उनी भन्छन्।
“व्यवसाय गर्ने नाममा गीतमा हास्य छिर्न थाल्यो, तीज भनेर रत्यौली छिराउन थालियो, महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला बनाउन थालियो। तीज डिस्को आउन थाल्यो, तीज ब्याटल गर्न थालियो। गितार बजाउन थालियो।”
एउटा गीत कसरी सदाबहार बन्दै आएको छ?
तीजका बेला सबैभन्दा धेरै सुनिने सदाबहार “तीजको रहर आयो बरी लै” लाई रिमेक(परिमार्जन) गरिएको गीत युट्युबमा राखिएको सात वर्षमा १ करोड ८० लाख पटक हेरिएको छ।
तीजको गीत भनेर खोज्दा भेटिने गीत मध्ये सबैभन्दा हेरिएकोमा यो गीत पर्छ। तर थोरै समयमै त्यही हाराहारीमा हेरिएका गीत खासगरी पछिल्लो समय आएका महिला र पुरुष दुवैले गाएका छन्।
चेतन कार्कीको शब्द र मनोहारी सिंहको सङ्गीत रहेको यो गीत हरेक वर्ष तीजका बेला सदाबहार गीतका रूपमा गाउँदेखि सहरसम्म बज्छ।
४० को दशकमा प्रदर्शन भएको चलचित्र कन्यादानको गीत “तीजको रहर आयो बरी लै” पनि परम्परागत तीज गीत नभएको अध्येता आचार्य बताउँछन्।
आफ्नो विद्यावारिधिका बेला एक सयभन्दा बढी तीजका गीत अध्ययन गरेका आचार्य भन्छन्, “यो गीतको सङ्गीतमा चाहिँ तीजको रङ्ग प्रशस्तै छ।”
त्यसो भए तीजको रङ्ग बोकेका गीत कस्ता हुन्छन्?
आगँनीको डिल डाल काली कौवै का का
के समाचार ल्यायौ काली कौवै का का
तर महिलाका वेदना र पीडाका विषय पहिलाभन्दा फरक भएकाले शब्दमा परिवर्तन हुँदै गएको आचार्य बताउँछन्।
“नदी पारि दिए मेरा बाबैले
तर्न सकिनँ आइन बरिलै”
भन्ने भाका अहिलेका महिलाले गाउन नपर्ने उनी बताउँछन्।
“नदीमा पनि पुल लागेको छ अहिले त अनि पुल भएपछि तर्न गाह्रो भएन। भौतिक र मानिसको बौद्धिक विकास शिक्षाको स्तरका कारण समस्या फरक पर्दै जाँदा गीतका स्वरूप र बोल पनि फरक पर्दै गएका छन्,” उनी भन्छन्।
तीजका गीत कहिलेबाट गाउन थालियो?
तीजको गीत पौराणिक कथाबाट प्रेरित भएर आएको आचार्य बताउँछन्।
उनका अनुसार तीजका गीत खासगरी दुई प्रकारका छन्। एउटा महिलाका मनोवेदना र चाहनासँग सम्बन्धित छ भने अर्को शिव पार्वतीको आराधना गर्ने भजनसँग सम्बन्धित छ।
पहिला पहिला छोरीहरूको रजस्वला नभई विवाह गरिदिने र टाढा माइती हुने अनि सधैँ माइत जान नपाइने कारण तीजका गीतमा महिलाले सासू, जेठानी वा पतिबाट पाएका वेदना वा भोगाइ पोखिने गरेको उनी बताउँछन्।
तर यो गीत कहिलेबाट सुरु भयो भन्ने तिथि मिति यकिन गरेर भन्न नसकिने उनी बताउँछन्।
“लेख्य नेपाली भाषाको अभिलेख हामीले खोज्दा १०३८ को भेटिएको छ तर तीजको गीत त्योभन्दा पनि पहिला नै आएको अनुमान गर्न सकिन्छ। किनभने तीजको गीत कथ्य वा मौखिक भाषा हो र यसको इतिहास लेख्य भाषाको भन्दा पुरानो छ,” उनी भन्छन्।
पुराना गीतको जगेर्ना
भदौको तृतीयामा मनाइने तीजका लागि खासगरी नाग पञ्चमीदेखि ऋषि पञ्चमीसम्म गीत गाइने भए पनि पछिल्लो समय असारदेखि नै गाउन थालिएको तर पुराना गीतले भने निरन्तरता नपाएको लोक गायिका कोइराला बताउँछिन्।
पुराना गीतहरू नमरून् भनेर आफूले पश्चिममा प्रचलित ‘हम्क्याइलो गीत’ हजुरआमा पुस्ताबाट टिपेर गाएको कोइराला बताउँछिन्।
पोखराकी आफ्नो हजुरआमा उमेरकी बदसरा पराजुलीले गाएको सुनेर त्यसको भाका जोगाउन आफूले हम्क्याइलो गीत गाएको उनी बताउँछिन्।
“उहाँले गाउने गरेको भाकाको मलाई माया लाग्यो अनि मैले त्यसलाई उहाँसँग गाएँ,” उनी भन्छिन्, “हम्क्याइलो गीत भट्ट्याउने गीत हो। सबै कुरा गाउँदै गाउँदै गएर एउटा आख्यानजस्तो कथा लुकेको हुन्छ त्यो गीतमा।”
त्यस्तै भाकाको खोजी गरेर अहिलेको पुस्ताले जोगाउन खोजे मात्रै तीजको मौलिक गीत जोगिने उनी बताउँछिन्।
“तीजको गीत तीजको गीतजस्तो हुनुपर्‍यो। यसको सौन्दर्यको पक्ष सुरक्षित हुनुपर्‍यो। नत्र भने आन्तरिक मौलिक सुवास लोप हुनसक्छ। अहिले पनि तीजको गीत भनेको लोपोन्मुख अवस्थामा गइरहेको छ,” उनले भनिन्।
उसो त गीत मात्रै नभई तीज मनाउने चलनमै पनि पछिल्लो समय विकृति आएको बताइन्छ।
← दमनको पञ्चालमा एरिया समिति गठन
लखनऊमा मूल प्रवाहको नगर समिति पुनर्गठन →
कवितामा महिला साहित्यकारले पारिजातको उचाइ छोएका छन्
20 December 2019 21 February 2020 Nepaliekta 0
बनको बाघ भन्दा मनको बाघ भय लाग्दो
29 June 2020 29 June 2020 Nepaliekta 0
मेरो स्मृतिमा का. हेम प्रसाद पुन
23 September 2020 Nepaliekta 0